OTU ESI EDOZI UTORRENT MAKA NBUDATA IHE DI ICHE - UTORRENT - 2019
Ntugharị vidiyo dị mkpa iji jikọta ọtụtụ iberibe n'ime otu vidiyo. Ị nwere ike, n'ezie, mee nke a na-enweghị ngbanwe, ma ngwa ngwa ịwụda site na mpaghara gaa na mpaghara agaghị emepụta echiche nke vidiyo zuru ezu. Ya mere, isi ọrụ nke ntụgharị ndị a abụghị naanị maka ìsì, kama iji mee ka echiche nke ịmegharị otu akụkụ nke vidiyo gaa na ọzọ.
Kedu ka esi mee mgbanwe dị mma na Sony Vegas?
1. Bulite obere vidiyo ma ọ bụ ihe oyiyi n'etiti nke ịchọrọ iji mee mgbanwe n'ime nchịkọta vidiyo. Ugbu a na usoro iheomume ịkwesịrị ịmanye njedebe nke otu vidiyo gaa na ọzọ.
2. Site na nnukwu ma ọ bụ obere nke a ga - abụ "ntụgharị", ịdị mma nke mgbanwe ahụ ga - adabere.
Kedu ka esi tinye mmetụta mgbanwe na Sony Vegas?
1. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka mgbanwe ahụ bụrụ ọ bụghị naanị dị mma, ma nweekwa mmetụta ụfọdụ, wee gaa na taabụ "Transitions" ma họrọ mmetụta ị masịrị (ị nwere ike ịlele ha naanị site n'igosi ọbụ abụ na nke ọ bụla n'ime ha).
2. Ugbu a, jiri aka nri pịa mmetụta ịchọrọ ma dọrọ ya na ntanye nke otu vidiyo gaa na ọzọ.
3. A ga-emepe windo nke ị nwere ike ịhazigharị mmetụta dị ka achọrọ.
4. N'ihi ya, na ntaneti nke vidiyo ahụ, a ga-edepụta ihe ị rụpụtara.
Kedu otu esi ewepu mgbanwe mgbanwe na Sony Vegas?
1. Ọ bụrụ na ịnweghị mmasị na nsụgharị mgbanwe na ịchọrọ iji dochie anya ya, mgbe ahụ, dọrọ ọkpụkpụ ọhụrụ ahụ ka ọ bụrụ ebe ị ga-esi na-emegharị ihe.
2. Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ mmetụta ahụ kpamkpam, wee pịa bọtịnụ "Mgbanwe Mgbanwe".
3. Wee kpochapụ ya site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Ya mere, taa anyị mụtara ịmepụta nsụgharị dị nro n'etiti vidiyo ma ọ bụ ihe oyiyi na Sony Vegas. Anyị na-atụ anya na anyị nwere ike igosi ihe kachasị mfe iji rụọ ọrụ na ntụgharị na mmetụta maka ha na nchịkọta vidiyo a.